Celeberities – Page2– Burmese.asia
ရန်အောင် အတွက် စိုးမြတ်သူဇာရဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်
On December 15, 2018 By mmhtet
ဒီနေ့ (ဒီဇင်ဘာလ ၁၄) ရက်နေ့က ရန်အောင်ရဲ့ အသက် ၅၂ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်. ဒီ့အတွက်ကြောင့် အနုပညာရှင် ညီမငယ်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ စိုးမြတ်သူဇာက အခုလို မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်. ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ ရန်အောင်ရဲ့ အသက် ၅၂ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့မှာ အကယ်ဒမီစိုးမြတ်သူဇာက မွေးနေ့ဆုတောင်းစကားဆို ခဲ့ပါတယ်. လက်ရှိမှာလည်း သူတို့ နှစ်ယောက်က အနုပညာအလုပ်တွေ ဆက်တိုက်ဆောင်ရွက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်. ”ချစ်သော အကိုကြီး သက်ရှည် ကျန်းမာ အခုထက်ပို အောင်မြင်ပျော်ရွှင်ပါစေကြောင်း Happy Birthday ပါ အစ်ကိုကြီး” ဆိုပြီးတော့ ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့ မနက် ၃ နာရီ […]
၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက် Shwe FM (၉) နှစ်ပြည့်ပွဲတက်ဖက်ရှင်ဆုကို ရရှိသွားတဲ့ ချမ်းမြေ့မောင်ချို
မြန်မာအိုင်ဒေါပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ချမ်းမြေ့မောင်ချိုကတော့ ယနေ့ညကျင်းပနေတဲ့ Shwe FM (၉) နှစ်ပြည့်ပွဲလေးမှာ ဖက်ရှင်ဆုကို ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာအိုင်ဒေါ Season3ရဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီးတော့ First Runner-up ဆုရှင်လေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အပြုံးချိုချိုလေးတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေအပြင် ဒိုင်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုပါ ရရှိထားတဲ့ ချမ်းမြေ့မောင်ချိုကတော့ ယနေ့ည Shwe FM ပွဲကို တက်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပွဲလေးကိုတော့ နိုင်ငံကျော်အနုပညာရှင်တွေများစွာအပြင် မြန်မာအိုင်ဒေါက ပြိုင်ပွဲဝင် (၁၁) ယောက်လုံးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲဝင် ချမ်းမြေ့မောင်ချိုကတော့ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက် Shwe FM (၉) နှစ်ပြည့်လေးမှာ ဖက်ရှင်ဆုကို ရရှိသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မမျှော်လင့်ထားပဲ ရရှိသွားတာကြောင့် ချမ်းမြေ့မောင်ချိုနဲ့အတူ သူမရဲ့ပရိသတ်တွေက ဝမ်းသာပျော်ရွှင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Shwe FM ပွဲက […]
ချစ်သူရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက် ဂုဏ်ယူပြီး အပျော်လွန်နေခဲ့တဲ့ နန်းစုရတီစိုး
ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့ Hexagon Complex မှာ Shwe FM ရဲ့ (၉) နှစ်ပြည့်ပွဲကို ခမ်းနားစွာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အနုပညာရှင်ပေါင်းများစွာတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့ နယ်ပယ်အသီးသီးမှ ပုဂ္ဂိုလ်များလည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ Shwe FM ပွဲဟာ အနုပညာရှင်တွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကြား ရေပန်းစားတဲ့ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်တာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ ဆုပေါင်းများစွာ ပေးအပ်တဲ့ ဒီပွဲလေးမှာ အနုပညာရှင်တွေနဲ့အတူ ပရိသတ်တွေလည်း ကိုယ်တိုင်ရင်ခုန်ခဲ့ရပါတယ်။ အနုပညာရှင်တွေကို သက်ဆိုင်ရာဆုတွေအသီးသီးပေးအပ်ခဲ့ကြပြီးတော့ အဆိုတော် G Fatt ကတော့ ချစ်သူနန်းစုရတီစိုးနဲ့အတူ ရည်ရွယ်ပြီးရေးသားထားတဲ့ အကယ်၍လက်ထပ်ကြတဲ့အခါ သီချင်းလေးနဲ့ ဆုရရှိသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍လက်ထပ်ကြတဲ့အခါ သီချင်းလေးဟာနန်းစုရတီစိုး သီဆိုဖို့အတွက် ရေးသားထားတဲ့သီချင်းလေးဖြစ်ပေမယ့် G Fatt က သီဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ MTV ထွက်ရှိလာချိန်မှာလည်း ပရိသတ်အားပေးမှုတခဲနက်ရရှိခဲ့တဲ့ […]
Marvel က Scarlet Witchနဲ့ တူတယ်လို့ တင်စားခံနေရတဲ့ မေ
မေကတော့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အဆိုတော် မင်းသမီးချောလေးပါ။လှပကျော့ရှင်းတဲ့ အလှလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားရုံ တင်မ ဟုတ်ပဲ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အသံလေးကိုပါ ပိုင်ဆိုင်ထားသူပါ။မေကတော့ သရုပ်ဆောင်အလုပ်တင်မဟုတ်ပဲ ဂီတအလုပ် တွေကိုပါ လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။Facebook မှာ Cover Song လေးတွေ ဆိုဖြစ်နေပါတယ်။ ပရိသတ်တွေချစ်တဲ့ မေကတော့ သူမရဲ့ အကောင့်မှာ ဒီဇင်ဘာ(၁၃)ရက်နေ့က ပုံအသစ်လေးတွေ တင်ထားပါတ ယ် ။ကြက်သွေးရောင်ဝတ်စုံလေးနဲ့ ရဲရဲနီစွေးပြီး လှနေတဲ့ သူမရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို တွေ့ရမှာပါ။မေ ကို ချစ်တဲ့ ပရိသတ် တွေ ကတော့ သူမရဲ့ ပုံလေးတွေကို ကြည့်ပြီး Marvel ရဲ့ဇာတ်ကောင် Scarlet Witch နဲ့ တူတယ်လို့ တင်စား ထားကြတာကိုလည်း […]
ဟောလီးဝုဒ်မင်းသားတွေထက်တောင် ချမ်းသာကြတဲ့ ဘောလီးဝုဒ်မင်းသားများ
On December 15, 2018 By jokerbank
ဘောလီးဝုဒ်ရုပ်ရှင်လောကဆိုတာ တစ်ကမ္ဘာလုံးအနှံ့ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ကမ္ဘာ့ရုပ်ရှင်လောကမှာ ဟောလီးဝုဒ်ပြီးရင် ဘောလီးဝုဒ်က ဒုတိယနေရာလိုက်နေတယ်လို့ ပဲ ဆိုရမှာပါ။ ဒီလိုအောင်မြင်မှုတွေရထားတဲ့ ဘောလီးဝုဒ်အနုပညာရှင်တွေဆိုရင်လည်း တစ်ကမ္ဘာလုံးမသိတဲ့သူမရှိဖြစ်လာတဲ့အပြင် ကမ္ဘာ့ ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးအနုပညာရှင်တွေစာရင်းထဲမှာလည်း ပါဝင်လာနိုင်ကြတာကိုတွေ့ ရပါတယ်။ အဓိကအကြောင်းအရင်းကတော့ သူတို့ ရရှိလာတဲ့ အနုပညာကြေးတွေက ဟောလီးဝုဒ်ရဲ့တစ်ချို့ နာမည်ကျော်အနုပညာရှင်တွေရတဲ့ပမာဏထက် မနည်းကို ရလာကြတာကြောင့်ပါပဲ။ ဟောလီးဝုဒ်မင်းသားတွေထက်တောင် ချမ်းသာတယ်လို့ ဆိုရမယ့် ဘောလီးဝုဒ်မင်းသားတွေရဲ့ ဝင်ငွေပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ Irrfan Khan မင်းသားချော Irrfan Khan ရဲ့ ဝင်ငွေပိုင်ဆိုင်မှုစုစုပေါင်းဟာ $50 million တောင်ရှိတဲ့အတွက် ဟောလီးဝုဒ်မင်းသားတစ်ယောက်ရဲ့ ဝင်ငွေပမာဏနီးပါးလောက်ရှိနေတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ Akshay Kumar မင်းသားချော Akshay Kumar ရဲ့ ဝင်ငွေပိုင်ဆိုင်မှုစုစုပေါင်းဟာ $65 […]
မိဘတွေဆီက စိန်​တစ်​ဆင်​စာလက်​​ဆောင်​ရခဲ့တဲ့ သဉ္ဇာနွယ်​ဝင်း
အသံဝဲဝဲလေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းစွာ စကားပြောတတ်တဲ့ နိုင်ငံကျော်မင်းးသမီးချောလေး သဉ္ဖာနွယ်ဝင်းဟာ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်ကို တပွေ့တပိုက်ကြီး သိမ်းပိုက်နိုင်သူတစ်ဦးပါပဲ။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သဉ္ဖာနွယ်ဝင်းဟာ ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုတော်တော်များများမှာ သရုပ်ဆောင်ရင်း ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကို ရရှိထားသူတစ်ဦးပါပဲ။ သဉ္ဖာနွယ်ဝင်းဟာ အိမ်ထောင်ကျပြီးနောက်မှာတော့ အနုပညာအလုပ်တွေကို မလုပ်ကိုင်တော့ပေမယ့် သူမကိုချစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ သဉ္ဖာနွယ်ဝင်းကို ဆက်လက်အားပေးနေကြဆဲပါပဲ။ သရုပ်ဆောင်သဉ္ဇာနွယ်ဝင်းကတော့ ၂၀၁၇ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ(၁)ရက်နေ့က မင်္ဂလာဆွမ်းကျွေး အလှူပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဖေဖော်ဝါရီ(၂)ရက်နေ့က နှစ်ဦးသဘောတူ ရုံးတက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြကာ ဖေဖော်ဝါရီ(၃)ရက်နေ့မှာတော့ Melia ဟိုတယ်မှာ မင်္ဂလာပွဲကို ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ယခုအချိန်မှာတော့ သဉ္ဇာနွယ်ဝင်းတို့ ဇနီးမောင်နှံကတော့ သားလေးတစ်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ပျော်စရာကောင်းတဲ့မိသားစုလေး ဖြစ်နေပါပြီ။ သဉ္ဖာနွယ်ဝင်းဟာ အနုပညာအလုပ်တွေကို မလုပ်ကိုင်တော့ပဲ သူမရဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့ […]
ပရိသတ်​​တွေအရမ်းချစ်​ကြတဲ့ စွယ်​စုံရအနုပညာရှင်​ကြီး ​နေတိုးက​တော့ ဒီ​နေ့ညမှာ ကျင်းပပြုလုပ်​ခဲ့တဲ့ Shwe FM (9) နှစ်​ပြည့်​ ဆု​ပေးပွဲအခမ်းအနားမှာ ရုပ်​ရှင်​ဇာတ်​ဝင်​​တေးသံရှင်​ဆုကို ဆွတ်​ခူးရရှိခဲ့တယ်​လို့ သိရပါတယ်​။ “လ​ရောင်​ဖြာတဲ့ အင်း​လေးမှာ” ရုပ်​ရှင်​ဇာတ်​ကားကြီးထဲက ဇတ်​ဝင်​​တေးဖြစ်​တဲ့ “လ​ရောင်​​ချော့​တေး” သီချင်း​လေးက​တော့ အကိုကြီးတစ်​​ယောက်​က ညီငယ်​​လေးအ​ပေါ်ထားတဲ့ ​မေတ္တာကို အပြည့်​အဝပုံ​ဖော်​ထားတာပဲ ဖြစ်​ပါတယ်​။ မိုမို​လေးချစ်​ပရိသတ်​​တွေအတွက်​ လွမ်း​ဆွေးဖွယ်​​ကောင်းတဲ့ သီချင်း​လေးနဲ့ ဆုရရှိခဲ့တဲ့ ​နေတိုးရဲ့အ​ကြောင်းကို ​ဖော်​ပြ​ပေးလိုက်​ပါတယ်​​နော်​။ အဆိုပါ ဆုကို​တော့ ​နေတိုးကိုယ်​​တိုင်​ တက်​ယူနိုင်​ခြင်းမရှိတာ​ကြောင့်​ သရုပ်​​ဆောင်​ ဝါဇင်​က ကိုယ်​စား ဆုယူ​ပေးခဲ့ပါတယ်​။ ​နေတိုးက​တော့ ရုပ်​ရှင်​ဇာတ်​ဝင်​​တေးသံရှင်​ဆုကို ရရှိခဲ့တာနဲ့ပတ်​သတ်​ပြီး ပရိသတ်များအားလုံးကို ​ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် ခ င်ဗျာ …” လို့ လူမှုကွန်​ယက်​မှာ ​ရေးသားထားပါ​သေးတယ်​။ ​နေတိုးသီဆိုထားတဲ့ […]
ကိုရီးယား-မြန်မာ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်သို့ တက်ရောက်လာတဲ့ F4 မင်းသမီးလေး ဂင်ဂျန်ဒီ
On December 14, 2018 By mmhtet
F4 ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွဲနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကပရိသတ်တွေရဲ့အသည်းနှလုံးမှာအခိုင်အမာနေရာယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ မင်းသမီးလေး ဂင်ဂျန်ဒီဟာ မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ မနေ့ညပိုင်း ဒီဇင်ဘာလ 13 ရက်နေ့ည ဆယ်နာရီခွဲလောက်မှာ ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့ရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကို မလာရောက်ခင်မှာလည်း သူမပရိသတ်တွေကို လာရောက်ကြိုဆိုပေးကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဂင်ဂျန်ဒီဟာ ရိုက်ကူးရေးကြောင့် လာရောက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ကိုရီးယား-မြန်မာ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်အတွက် လာရောက်တာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကိုရီးယား-မြန်မာ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ The ​1st Korea Myanmar Film Festival ပွဲကို ရန်ကုန် Waterboom မှာကျင်းပနေတာဖြစ်ပြီးတော့ ဂင်ဂျန်ဒီတက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ယနေ့ကျရောက်တဲ့ (၅၂)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့လေးမှာ မိခင်ခြေရာကို ယူခဲ့တဲ့ အကယ်ဒမီများရှင် ရန်အောင်
ကိုရန်လေးလို့ အနုပညာလောကသားတွေရော ပရိသတ်တွေပါ ချစ်စနိုးခေါ်ခြင်းကို ခံရတဲ့ ရန်အောင်ဟာ အကယ်ဒမီ ဆု (၆)ဆုကို ရရှိထားတဲ့ ဝါရင့်သရုပ်ဆောင်တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉ ၉ ၁ ခုနှစ်က မယ်သီတာလိုမိန်းကလေး ၊၁၉၉၅ ခုနှစ်က ပုဂံမှာ သာတဲ့လ ၊၁၉၉၆ ခုနှစ်က အလင်းဖျော့ကောင်းကင် ၊၁၉၉၈ ခုနှစ်က ညမင်းသား ၊ ၂ဝဝဝ ခုနှစ်က မောဟမျဉ်းပြိုင်များ နှင့် ၂ဝဝ၆ ခုနှစ်က ဂုဏ်ရှိန်ပြင်းတဲ့ချစ်ခြင်းသိက္ခာ ဇာတ်ကားများနဲ့ ဇာတ်ဆောင်အကယ်ဒမီများ ရရှိထားသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ကတော့ အနုပညာလောကထဲမှာ ဆယ်စုနှစ်များစွာ အောင်မြင်မှု ရရှိထားတဲ့ သရုပ်ဆောင် ရန်အောင်ရဲ့ အသက်(၅၂)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့လေးလဲဖြစ်ပါတယ်။ အများက ချစ်စနိုးနဲ့ […]
အရင် လိုအလုပ်မရှိတော့ ဝမ်းန ည်းရတယ်ဆိုတဲ့ ဝါရင့်လူကြမ်းမင်းသားနှစ်ယောက်
ပ ရိသတ်တွေရဲ့အမုန်းတွေကိုခံယူပြီး ကျရာဇာတ်ရုပ်မှာ ပီပြင်အောင်သရုပ်ဆောင်ကြတဲ့ လူကြမ်းမင်းသားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ စိုင်းအောင်တင့်နဲ့ မင်းစိန်တို့နှစ်ယောက်ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းက အောင်ခိုင်နဲ့ ဝါဝါအောင်တို့ရဲ့ မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည် ၁၃ နှစ်ပြည့်အလှူလေးမှာပါဝင်ကူညီကုသိုလ်ယူခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေကမုန်းပေမယ့်ကျရာတာဝန်ကိုကျေပွန်အောင်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ ရဲရဲတောက်အနုပညာရှင်တွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ကလိုအလုပ်တွေကမကောင်းတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်စားဝတ်နေရေးဟာလည်းအဆင်မပြေတော့ပါဘူး။အခုလိုသူများအလှူမှာပါဝင်ကုသိုလ်ယူရတာတောင်အတော်လေးကျေနပ်ပီတိဖြစ်ရပြီးကိုယ်တိုင်သာလှူရမယ်ဆိုဒီထက်ပိုပြီးကျေနပ်ရမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။သို့ပေမယ့်အရင်ကလိုအလုပ်အကိုင်တွေမကောင်းတော့တာကြောင့်အလှူအတန်းတွေမလုပ်နိုင်တဲ့အပေါ်ကိုတော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အနုပညာသမားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြင်လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ရာမှာလည်း အဆင်မပြေဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ အသက်အရွယ်အိုမင်းလာပြီဖြစ်တာကြောင့် ဂရုမစိုက်ကြတော့တဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အပေါ် စိတ်မကောင်းဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ အစည်းအရုံးနဲ့နာမည်ကျော်မင်းသားတွေကလည်းလူကြမ်းတွေရဲ့ဘဝကိုစာနားနားလည်ပြီးကူညီဖေးမသင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မင်းသားတွေထဲမှာပြေတီဦးတစ်ယောက်ကတော့အကူအညီလိုရင်ပြောပါလို့မေးဖော်ရတာကိုပဲကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ထမင်းရှင်ဖြစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေကိုတော့ အမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်ပြီး အဆင်ပြေပါစေလို့ဆုတောင်းပေးတဲ့အကြောင်းကို ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။